Qubanaha » Maamulka Gobolka Banaadir oo dib u furay Wadada isku xirta isgoyska Shaqaalaha iyo KPP
Maamulka Gobolka Banaadir oo dib u furay Wadada isku xirta isgoyska Shaqaalaha iyo KPP
Masuuliyiinta Maamulka Gobolka Banaadir ayaa maanta dib u howlgaliyay Wadada Shaqaalaha degmada Hodan ee gobolka Banaadir.
Wadada Shaqaalaha ayaa ka mid ahayd waddooyin dhowr ah oo u xirnaa Sugida Amniga Caasimadda, iyadoona maanta Maamulka Gobolka Banaadir ay dib u howlgaliyeen.
Guddoomiyaha Gobolka Banaadir ahna Duqa Muqdisho Taabit Cabdi Maxamed ayaa sheegay in ay furantahay Wadada Shaqaalaaha wixii ka dambeeyo maanta taasina ay qeyb ka tahay sidii Shacabka Soomaaliyeedka Culayska looga qaadi lahaa.
Waxaana uu ka codsaday in Shacabka Muqdisho ay la shaqeeyaan Maamulka Gobolka Banaadir.
Guddoomiyaha oo sii hadlayay ayaa hoosta ka xariiqay in looga baahan yahay in wadayaasha Gaadiidku ilaaliyaan Shuruucda Waddooyinka , iyagoona u hoggaansamaya amarka ka soo baxaya laamaha Amniga xilliyada ay socdaan baaritaanada.
Wadada shaqaalah oo dhinac marta Xarunta Laanta Socdaalka iyo Jinsiyadaha Dowladda Soomaliya iskuna xirta Isgoysyada Shaqaalaah a iyo KPP ayaa noqoneysa wadadii ugu horreysay ee dib loo howl galiyo tan iyo markii ay shaaciyeen Golaha Wasiirada Soomaaliya in waddooyinka amniga dartiis dhagxaanta loogu jaray dib loo furi doono Todobaad ka hor.